Myanmar Gazette » မန်းဂေဇက် ဓါတ်ပုံပြပွဲ-၁ (ဈေးသည်) – မေလ-၂၀၁၂	164
သကြားလုံးကြော် says: နောက်ပြပွဲအတွက် အကြံ ပေးပါရစေ။ ဓာတ်ပုံတွေကို နံပါတ်တပ်တာထက် နာမည် (or) ခေါင်းစည်ပေးထားရင် comment လုပ်တဲ့သူတွေမတွက်ရော critique ဖတ်တဲ့သူတွေမတွက်ရော ပိုမဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။
အရီး Khin Latt says: သကြားလုံးကြော်ရေ ဓာတ်ပုံတွေ အားလုံး က “ဈေးသည်” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် နဲ့ အောက်မှာ အသက်ဝင်အောင် ရိုက်ပြီး အပျော်တမ်း ပြပွဲ လုပ်ထားတာပါ။
kai says: ပုံ(၁၃) ကဇွတ်ဝင်ယုံတင်မက.. ပုံထဲ..
တောက်စ်.. အသုံးကိုမကျ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
အရီး Khin Latt says: ဤကဲ့သို့ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သိတာလဲ မင်္ဂလာတစ်ပါး ပါဘဲ။
Was this answer helpful?LikeDislike 1161
မှော်ဆရာ says: ဗုတ်ပေးတာ 145 ဆိုတော့ ရွာသူရွာသား တော်တော်များများတော့ ပေးပြီးသွားပြီ ထင်ပါရဲ့ ..
ရွာစားကျော် says: ပုံ ၂၃ ပို့တဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာတော့ တော်တော်အားငယ်နေမှာပဲ
Ch@vez says: ဟိုနေ့က ပါတယ်ဗျ..
Ch@vez says: ဇဂါးမစပ် ..သဂျီး ၂ဗုတ် ရသွားပြီဗျို့ …
Khaing Khaing says: ကိုဂီ ဘာလို့ဖော်နေတာလဲ …… သူကြီးအမျိုးတွေသိရင် သူကြီးပုံကို အလကားနေထိုင် ဗုတ်နေဦးပါ့မယ် ……..
Was this answer helpful?LikeDislike 1850
Khaing Khaing says: ကိုဂီရေ …. ဓာတ်ပုံပြပွဲထဲမှာ မန်ဘာဝင်အသစ်တွေ ပါလာတယ်နော် ……. တစ်ချို့ဆို ပထမဆုံးဓာတ်ပုံပြ ပွဲထဲကိုဝင့်မန့်တယ် အပေါ်ကသကြားလုံးကြော်ဆိုရင် ကော်မန့် (၂) ခါပဲပေးရသေးတယ် ….. အဟဲ အူးဗိုက်ကလေးပြောသလို ဖြစ်တော့မယ် …… ၀င်းဦးရုပ်ရှင်ကားရိုက်နေကြပြီနဲ့တူဒယ် …….. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် “ရွှေပြည်နန်း”တော့ ဖြစ်စေချင်တယ် ……….
Mလုလင် says: ညီမ ရေ … မန်ဘာ အသစ်တွေဝင်လာတာ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ … ကျွန်တော် တို့လုပ်တဲ့ပြပွဲလေးကို စိတ်ဝင်စားကြလို့ လာတာဆိုတော့ ကျွန်တော် တို့က ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ကြိုဆိုရမှာပါ။ ရွာထဲမှာ ဓာတ်ပုံ(ခရီးသွား၊ အလှပုံ၊ ရှုခင်း) ရိုက်တဲ့သူက လက်ချိုးရေ လို့ ရတဲ့အနေအထား မှာရှိပါတယ်။ ဓာတ်ပုံပဲ .. အပတ်တကုတ် ရိုက်နေတဲ့ သူဆို .. ပို နဲသွားပါပြီ .. ဒါကို ရွာထဲက member(old) တိုင်းသိထားတဲ့အမှန်တရားပါ။ အဲ့ဒီတော့ photographer တွေ ပိုများလာ ဖို့ကို ကျွန်တော် တို့ကမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ အမြင်၊ ဓာတ်ပုံ အတွး member တွေ ပိုများလာတာ့ မကောင်းဘူးလားဗျာ။ ရွှေပြည်နန်းဖြစ်ချင်တယ် ဆိုတာက (မှန်မှန်ကန်ကန်) ဖြစ်ချင်တယ်လို့ ပြောချင်တာနဲ့ တူပါတယ်။ ညီမရေ … မမှန်တာလုပ် ရင် သူ့ ဘ၀ သူ့အကြောင်းပါ ..ဒီလို ပွဲလေးကို တောင်မှ ဒီလို လုပ်ရင် … သူ့ ဘ၀ ဘယ်တော့မှ လူမွေးလူတောင် ပြောင်မှာ မဟုတ်ဘူး (ဆုမတောင်းပဲ ပြည့်မှာပါ။) အခု ၂နာရီ ခွဲ 31 ရက်နေ့ View Result ကိုကြည့်လိုက်တော့ 4-5-8 ဒီလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ပုံ သုံးပုံ လုံးကို ယှဉ် ကြည့်လိုက်ရင် ညီမ ပြောတဲ့ ၀င်းဦး ရုပ်ရှင် ဆိုတာ ပုံ ၅ ရဲ့ ပိုင်ရှင် ကိုပြောနေသလို လို ကျွန်တော် ခံစားရပါတယ် (ကျွန်တော့ တဦးတည်း အမြင်)ပါ၊ မှားချင်လဲ မှားမှာပါ။ ညီမ ရဲ့ comment အတွက် ကျွန်တော် သူ့ကို တော်တော် အားနာရပါတယ်။ (တစ်ကိုယ်ထည်း ကျိတ်အားနာ) .. ညီမ ရေ … ကျွန်တော် တို့ ပြပွဲ ရဲ့ result က အပျော်တမ်း ပါ။ ညီမရဲ့ comment ကိုဖတ်ပြီး ..စာဖတ်သူ အများစုက ဒီပြပွဲ က တော့ အလကားပါကွာ လို့ များ ထင်ကုန်ကြရင်၊ ၀င်ပြတဲ့ သူတွေက ငါ့ကိုများ ပြောသလား .. သူ့ကိုများပြောသလား ဆိုပြီး ဟိုလိုလို ၊ ဒီလိုလို တွေ တွေးကုန်ရင်ဖြင့် …
Khaing Khaing says: ကိုလုလင်ရေ ညီမက အပျော်တမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် အပျော်လေးဝင်ပြောမိတာပါ …. နံပါတ် (၅) ဒါ့ပုံပိုင်ရှင်လည်း ညီမပြောတာမှားရင် ခွင့်လွှတ်ပါနော် ……. နေရာတကာ မသိ သိတာလေး ၀င်အာတာအကျင့်ဖြစ်နေလို့ပါ ……… ကိုလုလင်က အခုလိုတစ်ခြားလူအပေါ်အားနာတတ်တဲ့ စိတ်ကိုလည်း ညီမချီးကျူးပါတယ် ……… အောင်လသီချင်းလေးနဲ့တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်နော် ခင်မင်ရင်းနှီစွာဖြင့်
Mon Kit says: မွန်ကစ်တော့ ပုံ (၅) ကို ဗုတ်ခဲ့ပါတယ်…
Tin Tin says: ပုံ(၂၀) ကို ဗုတ်ခဲ့ပါတယ်…
kyeemite says: ပုံ-၁နဲ့ ပုံ-၁၁ ကြိုက်သဗျို့
မောင်ဘလိူင် says: ကျုပ်ကတော့ ပုံ (၁၈) ကို သဘောကျသဗျို့..ဓာတ်ပုံ ပညာတော့ နကန်း
ster says: ကျွန်တော်လဲ ဓါတ်ပုံပညာနားမလည်ပေမယ်. ပုံ(၄) နဲ. ပုံ(၁၈) ကတော်တော်ကြည်.လှတယ်ဗျ။ ကျန်တာတွေတော.သိပ်မခွဲတတ်ဘူး။
pooch says: ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ကျမလည်း နာမည်ပေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ အကြိုက် မတွေ့ခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ပါ ဓာတ်ပုံ ဆရာများ။ သုံးပုံ ကို အရီးပေးထားတဲ့ အတိုင်းပဲ ယူလိုက်ပါတယ်။
ပုံ(၂၃) “ ဇရာ” ကိုယ်တိုင်ကတော့ နံပါတ် ၁၈ ကို ကြိုက်လို့ ၁၈ ကို ဗုတ်သွားပါတယ်။ ဓာတ်ပုံအယူအဆကို မသိသလိုနားမလည်ပါဘူး။ ခံစားမှုနောက်ကို လိုက်ပြီး ပေးသွားတာပါ။
nozomi says: ပုခ်ျ ပေးတဲ့ အမည်လေးတွေ တော်တော်လှပါတယ် လိုက်လဲလိုက်ပါတယ်
အရီး Khin Latt says: Pooch ရေ – အတော် idea ကောင်းကောင်း နဲ့ စဉ်းစားနိုင်တဲ့ နာမည်လေး တွေပါ။
nozomi says: စတင်တဲ့ နေ့က အားလုံးကြိုက်တာတွေထဲက အကြိုက်ဆုံး တစ်ပုံ ကို ဗုဒ် လိုက်တယ်
ဒီ လောက်ဆို သူတို့အတွက် ( အဲဒီထဲ ကျွန်တော်လဲ ပါပါတယ်)လုံလောက်သွားပါပြီ ကျေနပ်သွားပါပြီ ကျွန်တော်လဲ တစ်ပုံ တင်ထားပါတယ်
အရီး Khin Latt says: သေချာရဲ့လားဟယ်။ :D
အရီး Khin Latt says: နောက်တာနော်။ ပြောချင်တာက “မဒမ်နို” ကို ပြုစု ချင်တာ နဲ့ အကြောင်းပြသလား ကို ပြောတာပါ။ ;-)
မှော်ဆရာ says: အပိုင်သေချာတဲ့ ခိုင်ရွှေဝါမဲပေါ့ အရီးလတ်ရဲ့ …
padonmar says: မယ်ပုလိုပဲ ဒေါ်ဒေါ်လည်း ကိုယ့်ဖာသာနာမည်လေးတွေပေးပြီး ကြည့်မိတယ်၊
ရှမ်းပြည်သား (တောင်ပိုင်း) says: အလိုလေး…ကွန်မန်းတွေအကုန်လုံးမမြင်ပါလား….တချို့ပဲမြင်တယ်…သူကြီးဆာဖာဒေါင်းမှာကြောက်ပြီ
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ကိုယ်ဒေါ်ရယ် ..
Ch@vez says: တူမောရိုး (စနေနေ့သည်) နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပါသည်..။
Ch@vez says: နက်ဖြန် သွားဇယာ ရှိလို့ ..
Ch@vez says: ပုံ-၁၁
(ဖရက်စကို ထင်ရဲ့..) ပုံ-၁၉
nozomi says: ပညာတွေ အများကြီး ရပါသည်
မှော်ဆရာ says: ကျွန်တော့အနေနဲ့ကတော့ ဂီဂီ ပြောသွားတာ တော်တော်ပြည့်စုံသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် …
ဖားရှေ့ မှော်ကျူး မလုပ်ချင်တော့ပါ …။ ပြပွဲပုံတွေထဲမှာ ကျွန်တော် တစ်ပုံ ၀င်ထားတဲ့အတွက် ပြပွဲပြီးချိန်မှာ ကျွန်တော့ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးခဲ့ပုံကို
Azzurri says: ရိုက်တာတော့ မသိဘူး ကူးတာတော့ ဂလိုဘဲ …ကွန်ပူတာထဲ ထည့် ကူးတာ မဟုတ်လား …
မှော်ဆရာ says: အမလေး နာမည်ပြောင်းပြန်ပြီ … ဘယ်သူလဲလို့ မျက်စိတောင် လယ်သွားတယ် …
Thel Nu Aye says: အော်နောက်တယောက်များပိုစ့်ထပ်တင်တာလားလို့။ မျက်စိလည်သွားတာပဲ။ ဖတ်တောင်မဖတ်တတ်ဘူးကွယ်။ အာဇူရီ လား။ အီတလီနာမည်များလား။
Khaing Khaing says: အက်ဇယ်(လ်)ရီ လား အက်ဇာရီ လားမသိဘူးကွယ် …. သေချာတာတော့ အရူးရီးလို့ဖတ်ပါကွယ် ………:)
Was this answer helpful?LikeDislike 246
eipu says: ၄၊၅၊၉၊၁၀ ကြိုက်ပါသည်။
Shwe Ei says: ၅ပုံတိတိ ၀င်ဗုတ်လိုက်ပါတယ်။ အများဆုံးဗုတ်ခံရတဲ့လူက အခမဲ့ ဒါ့ပုံရိုက်ပေးပါမယ်တဲ့ မည်သူမဆိုပါတဲ့ (ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ပြောခြင်းဖြစ်ပါသည် ) :P
kai says: California US Std time စနေနေ့မနက် ၁နာရီခွဲမှာ.. မြန်မာပြည်စံချိန် စနေညနေ ၃နာရီမှာ poll/Vote ရပ်မယ်ဗျို့..
etone says: ပုံနံပါတ် (၂၀)လေးကို ကြိုက်လွန်းလို့ .. သဘာဝကျလွန်းလို့ … မြင်ရတာ ဟတ်ထိလွန်းလို့ … လှည့်ပတ်ပြီး … ဗုတ်ပေးတာတောင် …သူ့ခမျာ ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့ …… ဟင့် … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 825
may flowers says: ဓါတ်ပုံအကြောင်းတော့ နားမလည်ပေမဲ့ ပုံ-၁၉ လေးကြိုက်လို့…ဗုတ်လိုက်တယ်ဗျို့။
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ကျုပ်သာ ဒီပွဲကြီးရဲ့ ဘာမှမသိတဲ့အကဲဖြတ် ဘာမသိကြီး ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့
kai says: မန်းဂေဇက် ဓါတ်ပုံပြပွဲ-၁ (ဈေးသည်) – မေလ-၂၀၁၂
ဗိုက်ကလေး says: သုံးနာရီတောင် ကျော်ပကိုး..
မိုးတိမ် says: ပုံအားလုံးကိုကြိုက်ပါတယ်။
kai says: ဆိုတော့.. ပထမရတဲ့သူဆီဆုတွေသွားမှာလားဟင်င်င်..
Azzurri says: ပ ဒု တ ၃ယောက် ခွဲပေးမယ် စိတ်ကူးပါတယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 314
ချစ်ရင်ထူးနှစ် says: ဟင့်အင်း .. သားက တတိယ .. အမောင့် နည်းတယ်ဗျ သားက ..
မှော်ဆရာ says: အမောင့်ကို နှစ်ဆတိုးပြီး ဒုကို ပေးလိုက်ပါ … ဟင်း ဟင်း ဟင်း Was this answer helpful?LikeDislike 8413
MaMa says: မှော်ဆရာ နံပါတ် ၄ :D
Was this answer helpful?LikeDislike 4015
manawphyulay says: ဘယ်လိုပေးပေး ရမယ့်သူက ထိုက်တန်စွာ ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့အစား ၀မ်းသာပေးမိပါတယ်။ အတုယူဖို့လည်း သင့်ပါတယ်ရှင်။
Uncle Myo says: ဓါတ်ပုံပြပွဲကလေးအောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်မြောက်သွားတာကိုဝမ်းသာပါတယ်
ရွှေဘိုသား says: ဒို့ကတော့ ရွှေဘိုသား နံပါတ် 11 ပဲ
ချစ်ရင်ထူးနှစ် says: သားက အကဲဖြတ် ပေးမယ်… ဟိဟိ ..
htoosan says: မကျေနပ်ဘူး … မျက်နှာလိုက်တယ် …ဒိုင်လူကြီးတွေ လာတ်စားတယ် ။။ အနော်တို့ ဓလေ့ လေး အော်ကြည့်တာ.. :grin:
နောက်တာ .. ဆြာတွေ ဘယ်သူဆိုတာ ၁ ကနေ ၁၀ လောက်အထိတော့ ကြေညာပေးသင့်ပါကြောင်း ။
MaMa says: ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော် မသူတော် လုပ်ရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားနေပါတယ်။
ဆုရတဲ့အထဲမပါပေမယ့် ကိုယ့်အဆင့်နဲ့ကိုယ် ရထားတဲ့နေရာလေးကိုတောင် အတော်ကျေနပ်နေလို့ ကြွားချင်နေတာ။ ပြပွဲဆိုပေမယ့် ရွာထဲမှာ ဆရာ့ဆရာကြီးတွေ များလို့ ၀င်ပြဖို့ မစဉ်းစားပေမယ့် …..
amatmin says:ိုလေ့လာသူများ အထောက်အကူဖြစ်စေရန်
အကဲဖြတ်ပေးကြလျှင်ကောင်းမည်ထင်ပါကြောင်းး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12
putoo says: နောက်တစ်ခေါက်တော့ ပါဖြစ်အောင်ပါတော့မယ်ဗျို့ .. ခေါင်းစဉ်လေးပြန်ပြောပေးကြပါဦး
laypai says: ပုံ ၅ အတွက် ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း ပါ လို့။ တကယ်ကောင်း တကယ်ရ သွားတာ ပါ။
အရောင်အသွေး စုံစုံ လင်လင် ကို ဖန်တီး ပြီးရိုက်ထားသလို ဖြစ်သွားတော့ ဈေးသည် ဆို တဲ့ ခေါင်းစဉ် နဲ့ နဲနဲ လွဲ သွား တာ လို့ ထင် တယ်။ ကို ဗုတ် တဲ့ ပုံ က 19.91% (44 votes) နဲ့ ထိပ်ဆုံး ရောက် သွား တာ ဆို တော့ ပုံ ၅ ပိုင်ရှင် နဲ့ ထပ်တူ ၀မ်းသာ ပီတိ ဖြစ်ရပါကြောင်း။
Wunna Aung says: အင်းခုမှပဲ တွေ့တော့တယ် ဗျို့ မောလိုက်တာ တော်တော်ရှာလိုက်ရတယ် ဈေးသည် ကို အမှန်တော့ ကိုယ်တိုင်ကိုက ရှော်တာဗျ…. သေချာမှ မကြည့်တာကိုး…… မန်ဘာတွေ ဗုတ်တာကို ကြည့်တော့ ဒီပြပွဲက ခံစားမှုပြပွဲလို့ ထင်မိတယ်ဗျ……. ပွဲပြီးသွားပြီဆိုပေမယ့် ပြောလိုက်ဦးမယ်ဗျာ…. ပုံတွေအကုန်လုံး ကောင်းတယ်ဗျာ…. အကြိုက်ဆုံးကတော့ ၄၊၈၊၁၂၊၂၀ ဗျာ……. ပုံရဲ့ အရည်အသွေး တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ……
Mလုလင် says: အသစ် ဆိုလို့ ၀င်ဖော လိုက်ဥိးမယ်။ နံပါတ် ၂၀ က ဘုရင့်နောက် က တီတီ တစ်ယောက်ဗျို့  .. အဲ့ပုံက ဖုန်းနဲ့ရိုက်တာဗျ။ နံပါတ် ၄ က မြန်အောင် က ဆြာသမား။ နံပါတ် ၈ က ရန်ကုန်က ဆြာသမား နဲ့ နံပါတ် ၁၂ က မန်းလေးက ဆြာသမား …. အရည်အသွေး ကောင်းတယ်ဆိုလို့ … ကျေးဇူးပဲဗျို့  ….။